Celebrity lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
tsirairay fahitalavitra na Pop kintana manana ny mpankafy, alalan 'izany izy ary manohy hamirapiratra eo amin'ny habakabaky ny dingana sy ny sinema. Ny mpankafy ireo nazoto ny ho tonga hatrany an-hifandray amin'ny olon-kafa ny lazany, hanangana sampy amin'ny faladiany, ary tsy mahalala ny zava-misy fa dia izay ihany ny olona tahaka azy. Fa raha mbola misy mpankafy, dia hisy olo-malaza amin'ny aterineto lalao maimaim-poana, ary milalao azy, famoronana sampy fampisehoana na tsotsotra akanjo, fanandramana amin'ny volo, makiazy sy ny fitaovana. Fantaro i Harry Potter, Hannah Montana, Jack fody, ny Cullens sy ny endri-tsoratra hafa.
Niverina i Justin sy i Selena
Torohevitra manamboatra hatsaran-tarehy
Mankalaza ny Bollywood Celebrity
Ny baolina kitra baoritra baolina kitra
Atsaharo ny fahatongavan'i Kim Jong-Un
Angelina Ary Brad Romantic Date
Ice siny fanamby Filoha Edition
Tantara lamaody Hollywood Blonde
Fankalazana alohan'ny fotoana aorian'ny fisarahana
Leo ny Red Carpet fandripahana
Ariana Grande: fandokoana Fa Kids
Beyonce: fandokoana Fa Kids
Selena Gomez: fandokoana Fa Kids
As Of Yet Yet Unnamed Secret Service Saga
Mitokona ny mpitarika
Trump vs. hosoka vaovao
Movie Movie Teen Movie Are You a Biker or Surfer?
Akanjo malaza Lady Lady
tadidio ny filoha
Lalao Olo-malaza tamin'ny Category:
Farany Celebrity lalao
Lalao Online Rehetra Celebrity lalao
Celebrity Games – Stars akaiky anao
Celebrities dia bahoaka olona, ​​izay liana eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny sisa. Maro, indrindra fa mbola kely, nofy ho lasa kintana, mba ho fantatra eny an-dalana, miresaka momba azy ireo sy nanoratra. Fa ny lazany dia mety ho tsy mahafinaritra, fa koa manafintohina. Na dia ao amin'ny tena manintona mpisehatra sy ny mpilalao sarimihetsika, toerana tena mpilalao, mpihira sy ny modely no nihaza ny paparazzi, mba hanokatra azy lafiny tarehy. Dia namelatra tsaho momba ny fiainany manokana – izay fiovana izay misy ankizy maro no mijery tahaka ny tsy misy make-up sy ny akanjo. Mpanao politika dia ny olona-bahoaka loatra, fa na inona na inona tsara momba azy ireo tsy hanoratra – Afa-tsy tsikera. Fa toy izany tsaho tsy hanelingelina mpankafy mba hanaraka ny asa ny kintana sy ny nofin'i ny fahombiazana.
Olympus laza halan'ny haharitra, ary ny mametraka kintana hafa tonga dia hanome làlana ho any amin'ny lampihazo manaraka. Older mpanjakan'ny Pop, sinema, fanatanjahantena lampihazo dia nandroso ny anaram-boninahitra ho tanora. Ny azy ireo fotoana tsarovy, fa izay nahatsiaro amin'ny nostalgia izay tsy miraharaha. Fa raha mbola tokony hijanona, na dia lalao fotsiny maimaim-poana ny olo-malaza, dia velona sy tinady.
no malaza sampy amin'ny Lalao
Gaming vokatra dia lohahevitra izay mba hanehoana ny toe-tsainy ny olo-malaza, na mandany fotoana fotsiny tamin'ny antokony mahafinaritra.
fikatsahana fahafaham-po sy ny lojika asa
Matetika izany no natolotra ny kapoka politika. Ireo olona vitsy mahatsapa fangorahana, ary matetika te ho voasazy noho tian'ny olona fanapahan-kevitra izay manasarotra ny fiainantsika. Fa mankaleo mpihira sy ny Canary koa dia mijaly amin'ny hanorotoro kapoka nandritra ny fampisehoana. Ary raha ankizilahy Masy totohondry sy hanipy ny fahatezerana, ny ankizivavy hahita lalao malaza amin'ny aterineto hanao ny volony sy manao Hannah Montana-maso, Rihanna, Angelina Jolie, Emma. Olona, ​​koa, dia samy hafa ny sary, ary dia afaka mamorona endrika vaovao ny Harry Potter, Jack fody, ny Cullens, Justin Bieber, Rolando, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves sy ny hafa.
ny olo-malaza dia hita ao an-dakozia na dia manatitra ny mampihatra ny toerana tena notombohina tamin'ny vy prescription. Ve ianao te-hihinana toy ny kintana? Dia manana fahafahana hampivelatra ny kintana sakafo. Tandremo sao tsy mahita ny ankizivavy sy ny tantaram-pitiavana lalao mifanoroka. Iza no tsy mba ho any amin'ny fitaovam-piadiana ny bikàna cinematic traikefa sy ny fifandraisana tamin'ny molony? Fa ianao tadidio fa fitiavana foana teo amin'ny efijery mandresy vato misakana – aza hadinoina ny manana mpifanandrina na fahavalo, izay manakana ny fitiavana mampifandray. Noho izany dia tsy maintsy ho mailo sy hampitsahatra ny oroka, rehefa misy olon-kafa.
Ao amin'ny fikatsahana fahafaham-po ho hitanao maromaro ny asa fitoriana tamin 'izay ny kintana tsy maintsy afa-mandositra avy any am-ponja, mba mandalo Misafotofoto sy mampatahotra lapa mba hitsidika sy ampy hiala amin'ny misadventures amin'ny Hafakely. Koa, ny ankizivavy miaraka amin'ny tia ny fitsapana dia afaka mahita ny zavatra ilay lehilahy miaraka amin'ny olo-malaza, ary izany no tena mety ho an'ny olona tahaka ny tenany.
ny lalao dia tsy noho ny fahasorenana
eo isan-karazany toy izany isan-karazany izy fotsiny fa tsy leo. Hilalao baolina kitra ary mahita hoe iza no tsara indrindra – Ronaldo na Messi, fa amin'ny ady ny mpandresy dia – Jackie Chan, Chuck Norris sy Bruce Lee.
hanoratanao olo-malaza, aforeto azy-tsaina, mitady ny fahasamihafana, valin'ny fanontaniana quiz hiseho an-tsehatra, manao facials miadia amin'ny sabatra sy milalao Quidditch. Fa Michael Jackson no afaka ho lasa mpitsabo mpanampy, filoha teo aloha Bush – mpanao ady totohondry sy ny amin'izao fotoana izao Obama – mpisantatra.